မုန်းချောင်းဘေး ကျေးရွာများ ရေဝင်ရောက်မှုကြောင့် စိုက်ပျိုးထားသော ငှက်ပျောပင်များ ပျက်စီး - Yangon Media Group
မုန်းချောင်းဘေး ကျေးရွာများ ရေဝင်ရောက်မှုကြောင့် စိုက်ပျိုးထားသော ငှက်ပျောပင်များ ပျက်စီး
ပွင့်ဖြူ၊ ဇူလိုင် ၁၆
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပွင့်ဖြူမြို့နယ် မုန်း ချောင်းဘေးရှိ ကျေးရွာများမှ စိုက်ပျိုးထားသော ငှက်ပျောပင်များ မုန်း ချောင်းရေဝင်ရောက်မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများရှိခဲ့ကြောင်း ကျေးရွာတောင်သူများထံမှသိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လက မိုးများအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့မှုနှင့်အတူ မုန်းချောင်းရေများမြင့်တက်လာမှုကြောင့် မုန်းချောင်းဘေးရှိ ကျေးရွာများဖြစ်သော ထူးကျေးရွာ၊ သမန်းရင်း၊ သမုန်းကုန်း၊ သရက် ကုန်း စသည့် ကျေးရွာများ၌ စိုက်ပျိုးထားသော ငှက်ပျောခင်းများအထိ ရေဝင်ရောက်သဖြင့် ငှက်ပျောပင်များအမြစ်ပုပ်သေဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများရှိခဲ့သည်။
”ရေတက်တဲ့အချိန်က ငှက် ပျောပင်တွေရဲ့ ခေါင်ညွန့်ကနေ အပင်ထဲစိမ့်ဝင်ပြီး အမြစ်တွေပုပ်သွားတဲ့အတွက် အဲဒီငှက်ပျောပင် တွေ အကုန်သေကုန်မှာပါ။ ကျွန် တော်တို့ ကျေးရွာရဲ့အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းက ငှက်ပျောနဲ့ နှမ်း၊ မြေပဲစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း တွေကို လုပ်ကိုင်ကြတာပါ။ မုန်း ချောင်းရေကြီးပြီး စိုက်ပျိုးထားတဲ့ သီးနှံတွေထဲအထိ ရေဝင်ရောက်သွားတဲ့အတွက် ဒီနှစ်ဘာသီးနှံမှ မသိမ်းရပါဘူး”ဟု ထူးကျေးရွာမှ ငှက်ပျောစိုက်တောင်သူ ဦးအေးမင်းထွန်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ ရေနစ်သေဆုံးသည့် ငှက်ပျောပင်များသည် သက်တမ်းခုနစ်လ၊ ရှစ်လအရွယ်အပင်များ ဖြစ်သဖြင့် ငှက်ပျောခိုင်များစားရ ခါနီးတွင် ရေဝင်ရောက်သွားသ ဖြင့် တောင်သူများမှာ ငှက်ပျောပင်များစိုက်ပျိုးစရိတ်ပြုစုပျိုးထောင် စရိတ်မှာ တစ်ဧကငွေကျပ်သိန်း ၂ဝ ခန့် ဆုံးရှုံးမှုများရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မုန်းချောင်းဘေးရှိ ထူးကျေးရွာ၊ သမန်းရင်း၊ သမုန်းကုန်း၊ သ ရက်ကုန်းကျေးရွာများတွင် ငှက် ပျောစိုက်ပျိုးဧက ၂ဝဝ ခန့်ရှိပြီး မုန်းချောင်းငှက်ပျောစိုက်ခင်းများအထိ ရေဝင်ရောက်မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဧက ၅ဝ ခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တနင်္သာရီမြို့၌ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် မြို့တွင်းသို့ရေများ စတင်ဝင်ရောက်နေသဖြင်?
ဗန်ဒစ်မပါဝင်နိုင်သော်လည်း စိုးရိမ်ရန်မလိုကြောင်း အလစ်ဆန်ပြောဆို၊ မိမိ၏အတွေ့အကြုံများဖြင
လက်ပံတောင်းတောင် အစီရင်ခံစာပါ အစားထိုးမြေ ဧက ၁၉ဝဝ ဖော်ထုတ်ပေးရေး လေးပွင့်ဆိုင် ပထမဆုံးဆွေ??